Ammaanka magaalada Jowhar oo maanta ka gedisan sidii hore iyo ciidamo badan oo wadooyinka lagu daadiyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ammaanka magaalada Jowhar oo maanta ka gedisan sidii hore iyo ciidamo badan oo wadooyinka lagu daadiyay
Waxaa maanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe lagu wadaa inuu ka furmo wejiga labaad ee shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo muddo sanad ah ku dhawaad hakad ku jiray.
Xaaladda ammaan ee magaalada Jowhar ayaa maanta u muuqanaysa mid ka gedisan maalmihii hore, waxaana wadooyinka magaaladaasi lagu daadiyay ciidamo aad u badan oo iskugu jira ciidamo boolis ah iyo kuwa nabad sugidda ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD ayaa dhawaantaan shaaciyay in maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 3-da bisha September uu magaalada Jowhar ka furmi doonno shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu shirkaasi ku qabsoomi doono, iyadoona shirka ay weli ka maqan yihiin qaar kamid ah waxgaradka kasoo jeeda beelaha dega gobolka Hiiraan, waxayna IGAD hore ugu baaqday in waxgaradkaasi diidan shirka ay kasoo qeyb galaan shirkaas.
Madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa IGAD ayaa la filayaa in saacadaha soo socdo ay gaaraan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, kuwaas oo ka qeyb-gali doonno furitaanka shirka.
Shrikaasi ayaa la qorsheeynayaa inuu maanta furo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana qorshaha dowladda uu yahay in shirka maamulka loogu sameeynayo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe lasoo gaba-gabeeyo kahor doorashada dalka ka dhaceeysa sanadkaan dhamaadkiisa ee 2016ka.